Blatant abuse of human rights and worker rights | My Diary
← Gift: Happy Valentine Day
Zomi National Day →
Blatant abuse of human rights and worker rights
မလေးရှားမှ မတရား သော ကုမဏီအား ပြန်လည် အရေးယူခဲ့နိုင်သော မြန်မာ အလုပ်သမား2ဦး (မလေးရှားအထူးသတင်း)
FMT LETTER: From Charles Hector on behalf of 77 NGOs
We are shocked at how Asahi Kosei (M) Sdn Bhd has unjustly treated 31 Burmese migrant workers working at its factory at Lot 3377, Jalan Perusahaan Utama, Taman Industri Selesa Jaya, 43300 Balakong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
မလေးရှားနိုင်ငံ ၊ စီလန်ဂေါ ပြည်နယ် ၊ ဘလက်ကောင်း မြို့နယ်ရှိ Asahi Kosei (M) Sdn Bhd က ယနေ့ မလေးရှားလူမျိုးတွေစုပြုံ ပြောဆိုခံနေရတဲ့ ကုမဏီတစ်ခုအဖြစ် မလေးရှားမှာ အုတ်အာ် သောင်းနင်း ဖြစ်နေပါတယ် ။ ဖြစ်ပွားရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့
မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား 31 ယောက်အပေါ် လူ့အခွင့်အရေး အလုပ်သမား အခွင့်ရေး ချိုးဖောက်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
On or about Jan 31, 2011, these Burmese workers complained about non-compliance with an agreement the above-mentioned employer.The workers alleged that the employer was paying them less than what was promised.The company made wrongful deductions from their wages for hostel charges when the agreement was that the employer shall provide free accommodation. RM50 was also deducted for each dayaworker did not turn up for work, when the daily rate of pay was only RM20. They were denied paid medical leave,alegal right in Malaysia. On Feb 7, 2011agang of persons decended on the workers at their hostel and threatened them. The police allegedly came with these persons. They took all their cooking utensils and materials, television sets, cooking gas cylinders, refrigerator, table fan and the rice cooker used by the workers.
They then switched off the main electricity switch, and left the workers with no electricity supply. These persons can reasonably be assumed to be workers/agents of the employer.
ဖြစ်ပွားပုံမှာ 2011 ခုနှစ် ဇန်နဝါရှိလ 31 ရက်မှာ အထွန့်တက် အကြောင်းပြချက် မရှိတဲ့ စာချုပ်ကို မြန်မာ အလုပ်သမားများက မကြေနပ်တာကြောင့် အထက်ပါ ကုမဏီနဲ့ အဆင်မပြေမှု့တွေ ဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အလုပ်သမားများ စွပ်စွဲချက်ကတော့
အလုပ်ရှင်ကုမဏီဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်ခတွေထက် လျှော့ပေးပြီး အလုပ်သမားများအပေါ် ခေါင်းပုံဖြတ်သည်ကိုမခံနိုင်ပဲစွပ်စွဲတာဖြစ်ပါတယ် ။ ပိုမိုရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်စေတာကတော့ အဆိုပါကုမဏီရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အလုပ်သမားများထံမှ အဆောင်စရိတ်များ ပြန်လည်ဖြတ်တောက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ် ။ အမှန်မှာ ထိုစရိတ်စကများကို ကုမဏီမှသာ ကုန်ကျခံရမည်ဖြစ်ပါတယ် ။ အလုပ်သမားတစ်ဦးဟာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အလုပ်မဆင်းနိုင်ခဲ့လျှင် ကုမဏီမှ တစ်ရက်အတွက် ပေးငွေ Basic အလုပ်ခ 20 သာရှိသော်လည်း ဖြတ်တောက်ငွေမှာ 50 RM အထိ ဖြတ်တောက်ခဲပါတယ် ။ ထိုမျှမက ဆေးကုစရိတ် ၊ သွားနာသွားကြိုး ၊ ဖျားနာမှု့အတွက် ကုန်ကျမခံသည့်အပြင် ထိုနေ့အတွက်ပါ လုပ်အားခထဲမှ ဖြတ်တောက်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ အထက်ပါ ကိစ္စများကို လက်မခံသောကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီလ7ရက်နေ့မှာတော့ လူတစ်စုနှင့်အတူ ရဲများရောက်လာပြီး အလုပ်သမားများနေထိုင်လျှက်ရှိသော Hostel တွင်းမှ အသုံးပြုလျှက်ရှိသော မီးဖိုများ ၊ ရေခဲသေတ္တာများ ၊ တီဗွီများ ၊ ပန်ကာများ အားလုံးကို သိမ်းဆည်းသွားပြီး ထိုလူစုများနှင့်အတူ ရဲတစ်ချို့ပါ ပါခဲ့ပါတယ် ။
နောက်ဆုံးသူတို့တွေ လျှပ်စစ်မီးများကိုပါ အားလုံး ပိတ်သွားခဲ့ပြီး မြန်မာအလုပ်သမားများကို မီးပါဖြတ်တောက်ထားခဲ့ပါတယ် ။ ထိုသူများက အလုပ်ရှင်၏ အလုပ်သမားကိစ္စ တာဝန်ခံများလို့ ယူဆလို့ရပါတယ် ။
ထိုကိစ္စ အတွက် မြန်မာအလုပ်သမား နှစ်ယောက်အား ပြန်လည်စွပ်စွဲပြီး ကွာလာလပ်ပူလေဆိပ်မှ တစ်ဆင့် မြန်မာပြည်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန် ကုမဏီမှ စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
Two of workers were allegedly taken to the Kuala Lumpur International Airport under the impression that the employer will be sending them back to Burma (Myanmar). Fortunately, they managed to escape.
The following day, on Feb 8, 2011, the workers lodgedacomplaint with the Malaysian Human Rights Commission (Suhakam) and also were in the
process of lodgingacomplaint with the Labour Department.
ကံကောင်းစွာပဲ ထိုအလုပ်သမား2ဦးမှာ လေဆိပ်မှတစ်ဆင့် ပြန်လည် ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ 8 ရက်နေ့မှာ မလေးရှားနိုင်ငံ လူ့အခွင့်ရေးကောင်မရှင် (Suhakam) မှတစ်တင့် အလုပ်သမား အခွင့်အရေးဌာနထံ သတင်းပို့နိုင်ကြခဲ့ပါတယ် ။
On Feb 9, 2011 the employer hadameeting with the 31 workers, and proposed the following:
a) an increase in salary to RM23 per day (previously it was RM20),
c) that if worker is absent for two days in one month, they will deduct RM50 (previously for ever day absent, the employer deducted
d) Hostel charges shall be reduced to RM30 per month (previously it
was RM50 per month)
ဖော်ဖေဝါရီ9ရက်နေ့မှာတော့ အဆိုပါကုမဏီဟာ ထိုသတင်းများကြောင့် အလုပ်သမား 31 ဦးကိုပြန်လည်ပြီး အောက်ပါ အချက်များကို လက်မှတ်ထိုးပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတော့တယ် ။
1. လစာကို 20 မှ 23 ကျပ်အထိ တိုးမြှင့်ပေးမည် ။
2. ထိုလစာတွက် ထောက်ပံကြေး တစ်ရက်2ကျပ် မပါဝင်တော့။ ယခင် တစ်လလျှင် 30 သာ ထောက်ပံကြေးပေးထားပြီး ။
3. အလုပ်သမား တစ်ဦး2ရက်ပျက်ကွက်လျှင် 50 ဖြတ်တောက်မည် ။ ယခင် တစ်ရက်လျှင် 50 ဖြတ်တောက်သည် ။
4. အဆောင်စရိတ် တစ်လ 50 မှ 30 သို့ လျှော့ပေးမည် ။ ယခင် တစ်လ 50 ဖြတ်တောက်သည် ။
The employer then gave the workers an ultimatum that they sign the new contract on the spot, or be terminated and sent back to Burma immediately. The workers were not given any opportunity or time to consider the proposal, or to discuss the matter.
ထိုနောက် အလုပ်ရှင်က ယခုချက်ချင်း လက်မှတ်ထိုးရန် နှင့် သဘောမတူပါက ချက်ချင်းပင် မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်မည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။ အလုပ်သမားများအားလုံး မည်သည့် သဘောတူညီချက်မှ မပေးသေးပဲ အချင်းချင်းညှိနှိုင်းနေခဲ့ကြပါတယ် ။
Finally, all workers save two, cowed under pressure, signed the new contract. The two workers who did not sign are Thiha Soe (PP No: A 458011) and Aung San (PP No: A432863), whereby Aung San was the worker who signed the complaint for and on behalf of all the workers when the complaint was lodged at Suhakam on 8/2/2011.
နောက်ဆုံးမှာတော့ ထိုအလုပ်သမားများမှ သီဟစိုး Passport အမှတ် A-458011 နှင့် အောင်ဆန်း Passport အမှတ် A-432863 နှစ်ယောက်က လက်မှတ်မထိုးခဲ့ကြပဲ ကျန်သူများအားလုံး လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြရပါတယ် ။ ထိုအလုပ်သမား2ဦးမှ အောင်ဆန်းမှာ အထက်ပါ ကိစ္စ အတွက် လူ့အခွင့်ရေး မှာ သတင်းပို့ခဲသူပင်ဖြစ်ပါတယ် ။
Thiha Soe and Aung San were then handed over by the employer to the recruitment agent, possibly to send them back to Burma. Both workers have been separated and taken to different undisclosed locations. Both do not want to be sent back to Burma, and want to continue working at Asahi Kosei (M) Sdn Bhd factory in Balakong.
ထိုအလုပ်သမား2ဦးမှာ အလုပ်သမား အေးဂျင်းများနဲ့ တိုင်ပင်ခဲ့ရာမှာ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန် ပြောဆိုခံခဲကြရပါတယ် ။ ထိုသူနှစ်ဦးမှာ မတူညီသောဒေသများတွင်နေထိုင်သူများသာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အမှန်ကတော့ ထိုသူ 2ဦးလုံး မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ရန်မဟုတ်ပဲ ဆက်လက် အလုပ်လုပ်လိုသူများသာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Asahi Kosei (M) Sdn Bhd,asubsidiary of Asahi Kosei Japan Co. Ltd., which makes die-cast aluminium parts for HDD (computer parts), VTR, and automotive parts for, amongst others, Hitachi Ltd Automotive Systems, Hitachi Seisakusho, Denso (Toyota), Kawasaki Heavy Industry, Hitachi (Thai), Modenas, Seiko Instrument, Hitachi Global Storage, Matsushita Kotobuki, Matsushita Electronics, Toshiba, Maxtor, Seiko Epson, Kanematsu Device, Sony, Hitachi, Matsushita, JVC, Mitsubishi Electric, Philips, Sharp, Sanyo, Toshiba, Thomson, Yaskawa and Hitachi Mexico.
It is sad that several of these companies with declared codes of conduct and standards are seen to be associated with companies that violate workers’ and human rights.
အမှန်မှာ အထက်ပါ ကိစ္စ ဖြစ်ပွားသော ကုမဏီအပါအဝင် ကုမဏီအားလုံးသည် ဂျပန် Asahi Kosei ကုမဏီ လက်အောက် တရားဝင်ကုမဏီများဖြစ်ပြီး အလုပ်သမား အခွင့်ရေးများအတွက် တရားဝင်လက်မှတ်ထိုးထားသော ကုမဏီများဖြစ်ပါတယ် ။
ထို့ကြောင့် အလုပ်သမား အခွင့်ရေး ဌာနမှ ထိုကုမဏီထံ အောက်ပါ အတိုင်း သတိပေးစာ ပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ် ။
We hereby call on Asahi Kosei (M) Sdn Bhd to:
a) Immediately reinstate Thiha Soe and Aung San without any loss of benefits, and if they have already been sent back to Burma, be brought back to Malaysia to work.
1. အထက်ပါ အလုပ်သမား များ ဖြစ်သော မောင်သီဟစိုးနှင့် မောင်အောင်ဆန်းအား မည်သည့် ဖိနှိပ်မှု့ ၊ ထိခိုက်မှု့မှမရှိစေပဲ ထိုသူတို့အား တရားဝင် အလုပ်ပြန်လည်ခန့်ထားရန် ၊ အကယ်၍ မြန်မာပြည်ပြန်ပို့ခဲ့ပါက ပြန်လည်ခေါ်ယူရန် ။
b) To apologise to its workers for the wrongs it did, and to pay fair compensation/damages for their actions/omissions that violated rights as workers.
2. ထိုအလုပ်သမားများအား ပြန်လည်တောင်းပန်ရန် နှင့် သင့်တင့်မျှတသော လစာဖြင့် အလုပ်သမား ဥပဒေနှင့်အညီခိုင်းရန် ။
c) Call on the Malaysian government and/or the relevant ministries/department to take necessary action against Asahi Kosei (M) Sdn Bhd and the recruiting agent concerned to ensure that justice is done for the workers;
မလေးရှား အစိုးရ သို့ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ အထက်ပါ ထိုဖြစ်ရပ်အတွက် သက်ဆိုင်သော အရေးယူမှု့များပြုလုပ်သွားရန်
d) Call on the Malaysian government to legislate and take actions of preventing workers access to justice an offence withasubstantial penalty, that will deter employers resorting to termination and/or deportation asathreat and/or means to avoid legitimate claims by their workers;
မလေးရှားမှ အစိုးရများ ဝန်ကြီးဌာနများမှ အထက်ပါကိစ္စများအတွက် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား ထောက်ပံသော အေးဂျင်းကုမဏီများအား တရားမျှတစွာေ ဆာင်ရွက်ပေးသွားဖို့
နှင့် အလုပ်သမား အေးဂျင်းအား သေချာ စစ်ဆေးသွားရန် အပြင် မတရား သတ်မှတ်သော ပစ်ဒဏ်များ ၊ အရေးယူးမှု့များအား အလုပ်သမားများ အပေါ် မကျရောက်ရန် ကာကွယ်ပေးသွားကြရန် ။
e) Call on local councils and state authorities, who do issue permits and allow factories to operate within their jurisdiction, to ensure
that such factories do not violate human rights and worker rights. Asahi Kosei (M) Sdn Bhd operates in the state of Selangor;
သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်တိုင်း အာဏာပိုင်များမှ အလုပ်သမားများအတွက် ပါမစ်ထုတ်ပေးသောအခါတွင် လိုအပ်သော ကာကွယ်မှု့များ ၊ အာမခံများ ၊ နှင့် အလုပ်သမား နှင့် လူ့အခွင့်ရေးအား အဆိုပါ ကုမဏီ ကဲ့သို့ မခြိုးဖောက်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန်
f) Call on the Malaysian government to ensure that no migrant worker is sent back to their country of origin before first verifying that all outstanding and/or potential claims and disputes between worker and employer (and/or agent or other relevant party) in Malaysia have been fully and finally settled.
မလေးရှားမှ သက်ဆိုင်ရာများကို ခေါ်ယူပြီး ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်များသို့ မပို့ဆောင်မီ လုံလောက်သော အထောက်ထားများ အဖြင့် အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင်၏ သဘောတူ ပြန်လည်ကြောင်း အထောက်ထားကို ယူရန် ထိုနောက်မှ သာ ပြန်ရန် အတည်ပြုပေးရန် ။
g) Call on Hitachi, Sony, Philips and other companies which haveacode of conduct and/or who proclaim that they hold human rights and worker rights as important, who have been listed as customers of to seriously re-evaluate their relationship with such companies that clearly do not respect human rights and worker rights.
Hitachi, Sony,Philips, နှင့် အခြားသော အီလက်ထရောနစ်ကုမဏီများအား အလုပ်သမား အခွင့်ရေး သည် အရေးကြီးကြောင်း နှင့်
အထက်ပါAsahi Kosei (M) Sdn Bhd and/or Asahi Kosei Japan Co. Ltd ကုမဏီ ကဲ့သို့ မတရားသဖြင့် အလုပ်သမားများရဲ့ အခွင့်ရေးကို မချိုးဖောက်ရန် နမူနာပြသွားရန်
h) Call on consumers and/or investors to take into consideration human rights, including worker rights of companies and their supply chain when they do invest and/or purchase their consumer products
လှု့အခွင့်ရေး ချိုးဖောက်မှု့အား အမှန်ဖော်ထုတ်သော ထောက်လှမ်းစုံစမ်းသူများ ၊ အလုပ်သမားအခွင့်ရေးချိုဖောက်မှု့များ ကို ကာကွယ်သော အဖွဲ့စည်များ မှ ထိုသို့သောကုမဏီများ၏ ထုတ်ကုန်များအား ရှုံ့ချပေးသွားရန် 16.2.2011 Free Malaysia Today သို့ လူ့အခွင့်ရေး အဖွဲ့စည်မှ Charles Hector on behalf of 77 NGOs မှ ဆောင်းပါးတင်ပြီး ရဲဝံစွာ ထောက်ပြသွားပါတယ် ။
အထက်ပါ သတင်းအား ဘာပြန်ပြီးသည့် အချိန်ထိ ကျွန်တော် တို့မှ ဝန်ခံသည်မှာ မြန်မာအလုပ်သမား အတွက် ကာကွယ်သော
အဖွဲ့စည်းဟူ၍ မလေးရှားတွင် မူး၍ ရှုစရာ ပင်မရှိရုံမျှမက အားလုံး တရားမဝင်သော ဘဝအဖြစ် ရောက်ရသော အလုပ်သမားအားလုံးသည် ထိုသို့သော ကိစ္စများ နည်းတူ ခံခဲ့ရသော အလုပ်သမားများ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ရပါတယ် ။
ထိုဆောင်းပါးအတွက် မလေးရှားမှ နိုင်ငံသားများနှင့် လူ့အခွင့်ရေး အဖွဲ့စည်များ မှ အဆိုပါကုမဏီအား ပြင်းထန်စွာရှုံ့ချပြီး ဆင်းရဲစွာ ရှာဖွေစားသောက်သော အလုပ်သမားများကို အနိုင်မကျင့်ဖို့ Free Malaysia Today သတင်းဌာနမှာ ရေးသားသွားကြပါတယ် ။
Posted on February 18, 2011, in Cimphawng/Tuahkhak teng and tagged မလေးရှား၊ human rights, Malaysia. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.